धेरैलाई लाग्न सक्छ, क्यान्सर उपचार नहुने रोग हो तर यो भ्रम हो। रोग लाग्नै नदिन पनि सकिन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम गर्न र लागे पनि निको पार्न सकिन्छ। त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमै अघि सारिएको छ— खोप, परीक्षण (स्क्रिनिङ) र उपचार।
यी तीन पक्षको सफल कार्यान्वयन गरे नेपालबाट पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर निवारण गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पाठेघरको मुखको (सर्भाइकल) क्यान्सर निवारण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ। डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अदानोम गेब्रियससले भने, ‘क्यान्सर रोग निवारण गर्नु असम्भव सपनाजस्तो लाग्थ्यो तर त्यो सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न दृढ संकल्प लिएका छौं।’ डब्लूएचओको विश्व सभामा १ सय ९४ मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालमा क्यान्सरबाट महिलाको मृत्यु हुने प्रमुख कारणमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि मुख्य मानिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा यो महिलालाई पिरोल्ने क्यान्सरमध्ये चौथो मानिन्छ। बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत ३० देखि ६० वर्ष उमेरका महिलाको नियमित स्क्रिनिङ, समयमै उपचार र किशोरकिशोरीका लागि खोप जस्ता कार्यक्रमले पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट हुने मृत्युलाई रोक्न सकिने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ बताउँछन्। हरेक स्थानीय तहका वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्नुपर्ने क्यान्सर रोग विशेषज्ञको भनाइ छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको संक्रमण भएपछि विस्तारै पाठेघरको कोषिकामा परिवर्तन आउन थाल्छ। संक्रमणपछि क्यान्सर हुन सामान्यतया सातदेखि १० वर्षसम्म लाग्ने हुँदा जाँच गरी उपचार गराउँदा क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिने वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेष डा. आरती शाह बताउँछिन्।
नेपाल निजामती अस्पतालका वरिष्ठ स्त्री क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र परियार पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने ह्युमन प्यापिलो भाइरस (एचपीभी) भ्याक्सिनलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भ्याक्सिनमा सबै किशोरीको पहुँच पुग्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ’, डा. परियारले भने। पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगिन विकसित मुलुकमा किशोरीलाई खोप (भ्याक्सिन) दिने गरिन्छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायतमा किशोरीलाई ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइन्छ। अस्ट्रेलियन सर्भाइकल क्यान्सर फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपाल नेटवर्क फर क्यान्सर ट्रिटमेन्ट एन्ड रिसर्च (एनएनसीटीआर) ले पहिलोपटक सन् २००८ मै नेपालमा भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेको थियो।
विद्यालय जाने उमेरका ८ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत झन्डै ३० हजार किशोरीलाई खोप लगाइएको थियो। खोप कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सरकारी तालिकामा समावेश गर्नुपर्ने वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. आरती शाहको सुझाव छ। ‘नयाँ पुस्तालाई पाठेघरको क्यान्सर हुनबाट बचाउन खोप कार्यक्रम पहिलो आवश्यकता हो’, डा. शाहको सुझाव छ। क्यान्सरले एक चरण पार गरेपछि मात्र लक्षण देखाउँछ। नेपालमा हरेक वर्ष ३० लाख महिला पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ परीक्षणका लागि योग्य रहेको डा. परियार बताउँछन्। सुरुवाती अवस्थामै क्यान्सर भएको पत्ता लागे निको पार्न सकिने बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका पूर्वनिर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्य बताउँछन्। नेपाल क्यान्सर केयर फाउन्डेसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तका अनुसार सरकारले सहजीकरण गरे पाठेघरको मुखको क्यान्सर निवारण गर्न सकिन्छ।
स्वयम्भूमा दीप प्रज्वलन
नेपाल प्रजनन हेरचाह केन्द्र (एनएफसीसी) ले पाठेघरको मुखको क्यान्सर निवारण घोषणा गरेको उपलक्ष्यमा स्वयम्भूनाथमा दीप प्रज्वलन गरेको छ। डब्लूएचओअन्तर्गत रहेका मुलुकले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय सम्पदामा दीप प्रज्वलन गरेका छन्। पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको जागरुकता बढाउन दीप प्रज्वलन गरिएको हो।